August 28 a, Flyme 8 ga-abịarute ọnụ na Meizu 16S Pro | Gam akporosis
August 28 a, Flyme 8 ga-abịarute ọnụ na Meizu 16S Pro
Meizu abụwo otu n'ime ndị nrụpụta ama ama ama ama site n'inye otu n'ime usoro nhazi kachasị dị ugbu a, na Flyme, nke bụ nke anyị na-ekwu maka ya, emeela ka ndị mmadụ nwee ahụ iru ala, ọbụlagodi mgbe ha enwetaghị tinyere ịdị mfe nke ihe. Mana n'ime afọ abụọ gara aga, Flyme ji nwayọ nwayọ nwayọ.
Na mbido afọ a, Huang Zhang onye guzobere Meizu Technology gosipụtara nke ahụ Ofufe 8 ọ dịlarị n'ụzọ. Kemgbe ahụ, emeela ọtụtụ ihe ngosi banyere ya na ka ekpughere ya ụbọchị ewepụtara ya Na mbụ, egosighi mgbe ọ ga-amalite na ekwentị, rue ugbu a.
Na 28 nke Wednesde na-abịa, Meizu weputara Meizu 16S Pro, ya na Flyme 8 ga-emecha bia n’otu oge. Dị ka akụkụ nke mgbasa ozi, ụlọ ọrụ ahụ wepụtara ihe nkwado nke ejiri hụ ya nke ọma na akwa a ga-abịarute ya na ngwaọrụ ahụ.
Tụkwasị na nke a, Onye isi oche ndị isi nke Meizu Technology n'oge na-adịbeghị anya gosikwara ihe na okwu ahụ bụ "ngwa ngwa!", Via Weibo, ma jụọ onye ọ bụla ma Flyme 8 nwere ogbako pụrụ iche na nke modul nwere mmasị karịa na ọdịnaya ahụ. Companylọ ọrụ ahụ ga-eme ka Flyme 8 mara maka ọsọ ya na ihe ngwọta ọ ga-enye ndị ọrụ.O yiri ka o nwere mmasị n’igbo mkpa nke ihe ndị a niile.
N'aka nke ọzọ, Ekwuru na Flyme 8 mara ezigbo mma nakwa na ọ ga-abịa na atụmatụ ọhụrụ dị ka mkpịsị aka vortex animation, obere windo 2.0, Home Nche 3.0 na egwuregwu mode 4.0. Anyị amaworị ihe ụfọdụ njirimara ndị a gbasara, mana ndị ọzọ ka ga-ekpughere, yana ịmatakwu nkọwapụta niile nke mkpuchi ahụ na ịnwe kalenda mmalite nke otu maka ụdị dị iche iche nke onye nrụpụta.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » August 28 a, Flyme 8 ga-abịarute ọnụ na Meizu 16S Pro
Instagram ga - agbakwunye mgbasa ozi karịa na akụkọ ya
Redmi K30 amalitelarị na ọ ga-abịa 5G